You are here: Home somal Kooxda Xawaadle 00 2 iyo 0 kaga adkaatay Kooxda dhigeeda ah ee Masalaha.
Kulankii manta ee dhex maray lada Kooxood ee Masalaha iyo Kooxda Xawaadle, waxa si habsami leh uga bilaabmay abaaro 4:45 galabnimo, kulankan oo uu manta garsoore ka ahaa Maax.
Halfkii hore ee ciyaarta ayaa waxaay labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar aad u heersaysa, waxayna isla mariwaayeen 0 iyo 0.
Markii la isku soo laabtay Halfkii danbe ee ciyaarta waxay labada Kooxoodba la soo noqdeen ciyaaro aad u heersareeya. Labada Kooxood tababarayaashooda ayaa iyagu waxay ku dadaalayeen sidii ay ciyaar galadooda wax uga badalilahaayeen.
Waxaay kooxda Xawaadle la timid 2 gool oo dag dag ah, halfkii danbe ee ciyaarta, halka ay koox Masaluhu ay ayna waxba keensay, waxayna ciyaartii ku dhamaatay 2 iyo 0 oo ay guushu ku raaday kooxda Xawaadle.